Tuesday January 24, 2017 - 09:49:42 in Wararka by
Xarakada Al Shabaab ayaa Faah Faahin dheeri ah ka bixisay sababta ay u dishay saraakiil sarsare oo katirsanaa maamulka Dowladda Federaalka ugu magacaawnaa gobolka Sh/dhexe.
War rasmi ah oo kasoo baxay wilaayada Islaamiga Sh/dhexe ee taabacsan Xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in dilkii Taliyihii Booliska Sh/dhexe Col. Khaliif Cabdulle Carfaaye iyo sarkaal kale loogu aargudayay sheekh C/raxmaan Barsame oo ahaa naqiibka odayaasha dhaqanka degmada Gamboole islamarkaana kamid ahaa qoyskii Halgamaagii Sheekh Xasan Barsame allaha unaxariistee.
Idaacada diiniga Al-furqaan ayaa baahisay wareysi gaar ah oo ay la yeelatay waaliga Wilaayada Islaamiga Shabeelada dhexe Sheekh Yuusuf Kaba ku Tukude oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay weerarkii magaalada Jowhar wuxuuna sheegay in Col. Khaliif Carfaaye uu soo abaabulay weerarkii lagu dilay sheekh C/raxmaan Barsame.
Sheekh Yuusuf ayaa xusay in weerarka qaraxa ah ee ka dhacay gudaha degmada Jowhar lagu dilay saraakiil uu ku jira taliyihii maleeshiyaatka booliska dowlada federaalka ee gobalka Shabeelada dhex saraakiil kalane lagu dhaawacay.
Kaba Kutukade ayaa intaasi ku daray in Khaliif Carfaaye oo ahaa taliyihii booliska Shabeelada dhexe uu ahaa sarkaal si aad ah u dhibay shacabka ku dhaqan degmada Jowhar iyo goobaha kale ee ay AMISOM duulaanka kaga suganyihiin gobalka Shabeelada dhexe wuxuuna ku goodiyay in ay madaxyada ka guri doonaan dhammaan saraakiisha DF-ka ee ku lugta leh dhibaateynta shacabka Rayidka ah.
Halkan ka dhageyso Wareysiga Sheekh Yuusuf Ciise MP3